मनिषाको मृत्युको रहस्य पत्ता लाग्ला ? | Hamro Khelkud
मनिषाको मृत्युको रहस्य पत्ता लाग्ला ?
राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर बिमल घर्तीमगरकी बहिनी मनिषा को मृत्यको कारण पत्ता लाग्ला वा नलाग्ला सर्वत्र चासो बढेको छ । बिहीबार बिहान नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिकाको आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी मनिषाको शुक्रबार पोष्टमार्टमपछि अन्त्यष्टि गरिएको छ । तर, उनको मृत्यु हत्या वा आत्म हत्याका कारण भएको थियो भन्ने अझै एकिन भएको छैन । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउन दुई दिन लाग्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार नै बेल्जियमबाट फर्केका बिलम मनिषाको अत्यष्टिपछि शुक्रबार आमालाई लिएर घर गएका छन् । तर, उनीकी बहिनीको मृत्युका रहस्य खुल्न अझै कति दिन लाग्ला यसै भन्न सकिन्न । अहिले मनिषाको हत्या गरिएको र त्यसमा उनै प्रेमी नवलपरासीकै आशिष चौधरीको संलग्नलता रहेको शंका गरिएको छ । यद्दपी चौधरीले हत्या आफुले नगरेको बताउँदै आएका छन् । तथापी मनिषाको मृत्यु भएको दिन उनीसँग आफ्नो झगडा भएको चौधरीले स्वीकार्नुले पनि धेरेको शंका उनीमाथि नै केन्द्रित छ ।
नातेदार, साथी र छिमेकीले भने मनिषा सरल स्वभाविक रहेकी र उनले आत्महत्या गर्नै नसक्ने जनाउँदै उनको हत्या भएको आशंका गरेका छन् । शुक्रबार नै सांसदहरुले पनि मनिषाको हत्याको सुक्ष्म अनुसन्धानका लागि आवाज उठाएका छन् । देशभरबाट चिन्ता व्यक्त गयिरएको मृत्यको वास्तविकता जनसमक्ष आउला ? त्यसका लागि भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।